Covid 19 Ireo nahazo alalana ihany no afaka manao fitiliana
Namoaka fanambarana ny minisiteran` ny fahasalamam-bahoaka fa maro ireo toeram-pitsaboina sy hopitaly tsy miankina milaza fa manao fitiliana momba ny valanaretina Covid 19.
Ady amin’ny Covid 19 Tsy mangarahara ny momba ny CVO
148 ny maty, kanefa na iray aza dia marary izany, ka ny tambavy CVO no nambaran’ny Filoha, fa nahafaha-nifehy ny fidangan’ny fahafatesana. 1 890 051 ny CVO “Pack familial” nozaraina nanerana ny Nosy,
Covid 19 Madagasikara 13 no maty tao anatin’ny 48 ora
Olona 13 no lavon’ny coronavirus tao anatin’ny 48ora farany satria 6 ny sabotsy teo (03 Analamanga, 02 Vakinankaratra, 01 Matsiatra Ambony), ary 7 kosa omaly alahady (05 Analamanga, 01 Betsiboka, 01 Matsiatra Ambony).
Ady amin’ny Covid 19 Tonga ny andiany voalohan’ny “concentrateurs d'oxygène"
Tonga omaly 9 aogositra 2020 teny amin'ny seranam-piaramanidina Bani Ivato ny fiaramanidina nitondra ny andiany voalohany tamin'ireo "concentrateurs d'oxygène" sy ireo "lunettes nasales à oxygène".
Fanitarana ny « Fahamehana ara-pahasalamana » Mifanipa-kevitra ireo lehiben’ny andrimpanjakana
Nitarina 15 andro ny fahamehana ara-pahasalamana. Ny Didim-panjakana laharana faha-2020-890 tamin’ny 08 aogositra 2020 no manambara
Fiatrehana ny Covid 19 Nahazo fitaovam-pitiliana TDR an-jatony i Ambatolampy
Nohamaivanin’ny Filoha ny Covid 19 “Tsy namono olona noho ny pesta io… ”
Miisa 148 ny olona maty teto. Latsaky ny 1% ny olona maty, izay midika fa ambany ny taham-pahafatesana mitaha amin’ny firenena maneran-tany. Aty Afrika, dia 2% eo manerana an’i Afrika, raha toa ka 3,8% maneran-tany.
Voarohirohy tamin’ny fahafatesan’ny Dr Andriamilavonjy Daniel, ilay mpitsabo voan’ny covid-19 maty tao amin’ny CHU Morafeno Toamasina ny 23 mey izy. Ny 28 mey no nohadihadiana ny Pr Ralandison Stéphan Ralandison izay Sojaben’ny Sampam-pianarana Fitsaboana ao Toamasina ary miasa amin’ny CHU Morafeno. Ny 29 mey dia voalaza fa hiakatra fampanoavana, saingy navotsotra. Naneho ny firaisan-kiana feno taminy rahateo ny mpiasan’ny fahasalamana manontolo. Isan’ny nahafantarana azy ihany koa ny fanehoan-kevitra somary niendrika tsy faharesen-dahatra tamin’ny CVO, ka asa na misy hifandraisany amin’izany ny safotofoton-draharaha hanenjehana azy. Hatreto, dia nanapa-kevitra ny fitsarana, fa tsy hanisy tohiny aloha, hoy ny Minisitry ny Fitsarana Andriamahefarivo Jhonny omaly teny amin’ny Antenimierandoholona. Tamin’ny 10 ora sasany teo rehefa avy nanatontosa ny asany no niditra tao amin’ny toeram-piasana ny Pr Ralandison, ary gaga izy raha nahita fa niantona sy efa maty. Tsy nijanona teo izy, fa avy hatrany dia niantso ny namany, ary niara-nampidina ary hita fa maty noho ny fahasemporana aloha hatreto no voalaza fa nahafaty ny dokotera Daniel, hoy ny fanazavan’ny minisitry ny fitsarana. Nisy fianankaviana anefa nihevitra fa matoa maty io havany io dia nisy namono. Tsy maintsy nosokafana ny fanadihadiana noho izany. Hatreto aloha tsy mbola misy antony handraisana fanenjehana na fampiakarana fitsarana, ary mitohy ny fanadihadiana, hoy io Minisitra io. Na ny minisitry ny fitsarana na ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria dia samy tsy nisy nanamarina na nandiso io resaka mivoaka momba ny fisamborana io.